रातोमाटेमा बोलेरको ठक्करबाट क्षयकृष्ट अधिकृत कपिलदेव झा को मृत्यु !
मकवानपुर/ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका क्षयकुष्ट अधिकृत कपिलदेव झाको मोटर साइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । हेटौँडाको रातोमाटेमा लु १ प ४९९८ नंबरको बोलेरोले उनी चढेको ना १ ब १८९९ नम्बरको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिएको थियो । झाको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले पुष्टि गरेको छ । ...
विद्यालय पुनर्निर्माण पूरै वेवास्ता, कामको गति सुस्त !
मकवानपुर/भुकम्प प्रभावित मकवानपुरका विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम सुस्त छ । विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु पर्नेमा यसलाई वेवास्ता गरिएको पाइएको छ । विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्माणको सवालमा राज्य गैर जिम्मेवारी बनेको अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छन् । गत कार्तिकदेखि जायिकाको सहयोगमा नेपाल सरकारले मकवानपुरका सात वटा विद्यालय...
तालिम पाएका महिला बने दक्ष डकर्मी
मकवानपुर/मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका ६, जुईनाकी विमला माझी घर निर्माण तालिम पछि अहिले घर बनाउने काममा व्यस्त छिन् । ४० बर्षिया विमला पढ्न खासै नपाएपनि अहिले तायिलमपछि घर निर्माण गर्ने कार्यमा लाग्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँछिन् । हेल्भेटास स्वीस ईन्टरकोअपरेशन नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा तालिम पाएकी उनी अब घर बनाउँन...
ह्वील चेयर पाउँदाको खुसी !
मकवानपुर/मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर ३, छतिवनका अपाङ्गता भएका एकै घरका दिदी र दुई दाजुभाईको अनुहारमा आइतबार खुसीको चमक देखियो । जन्मदेखि नै गोडा राम्ररी नचल्ने समस्या झेलिरहेका ज्ञानीमाया घिसीङ् र उनका दुई दाजुभाई उत्तर घिसीङ, र टोकबहादुर घिसीङकोअनुहारमा एक गैर सरकारी संस्थाले खुसी प्रदान गरेको हो । नेपाल नेत्रहिन संघ...
किन आउँदैनन् बाल विवाहको उजुरी ?
मकवानपुर/मकवानपुरका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा बाल विवाह कायम छ । बालबालिकाका लागि योजना निर्माण बनाइँदा बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रम बनाइने पनि गरिन्छ । मकवानपुरको राइगाउँ, बेतिनी, पदमपोखरी, चुरियामाई लगायतका क्षेत्रमा बाल विवाह हुने गरेका कारण यसलाई रोक्न सघाउ पुगोस् भनेर स्थानीय बाल संरक्षण समितीले...
पहिरोको डरले नारायणगढ-मुग्लिन सडक आजदेखि राती बन्द !
मकवानपुर/नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि रातिको समयमा बन्द हुने भएको छ । पहिरोको उच्च जोखिम बढेपछि यो सडक खण्डमा सवारी साधन चलाउन नहुनेमा प्रशासन पुगेको हो । व्यवस्थापिका-संसद विकास समितिले रातको समयमा गाडी बन्द गर्नका लागि चितवन प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । पहिरोको उच्च जोखिम रहेको ठाउँमा राति पहिरो खसेको पनि नदेखिने...
मकवानपुर प्रहरीमा ६ महिनामै बहुबिवाहको १३ वटा मुद्दा दर्ता !
मकवानपुर/ चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को पछिल्लो ६ महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा १३ वटा बहुविबाहको मुद्दा दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर देखि यही असार २० गतेसम्ममा १३ वटा बहुविबाहको मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । चालु आवको मंसिरमा ३ वटा, पौषमा एउटा, माघमा एउटा, फागुनमा ३ वटा चैत्रमा एउटा, बैशाखमा एउटा, जेठमा...
लायन्स क्लब अफ हेटौंडा बजार ग्रीन सिटीद्वारा १ लाख बराबरको अक्षयकोष स्थापना
मकवानपुर/ लायन्स क्लब अफ हेटौँडा बजार ग्रीनसिटिले स्वर्गीय विहारीलाल बानियाँ स्मृती अक्षयकोषको स्थापना गरेको छ । शुक्रबार भएको अक्षयकोष स्थापना कार्यक्रम मार्फत् क्लबका निवर्तमान अध्यक्ष राजदेव वानियाँले आफ्नो बाबुको स्मृतीमा १ लाख बराबरको अक्षयकोष रकम क्लबलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । अक्षयकोष स्थापनाकै अवसर पारेर क्लबले...